लकडाउन उल्लंघन गरी हिड्दै हुनुहुन्छ ? प्रहरीको क्वारेन्टाईनमा यसरी थुनिनुपर्ला - Bidur Khabar
लकडाउन उल्लंघन गरी हिड्दै हुनुहुन्छ ? प्रहरीको क्वारेन्टाईनमा यसरी थुनिनुपर्ला
विदुर खबर २०७६ चैत १५ गते २१:३१
ल्टिफङसनल एरेस्ट एण्ड रेस्क्यू डिभाइस’को माध्यमबाट पक्राउ गर्दै सुरक्षाकर्मी । तस्वीर ः रत्न श्रेष्ठ÷ रासस
काठमाडौँ । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको उल्लङ्घन गरेर यदि बिना काम तपाई बाहिर हिँडिरहनुभएको छ ? यदि छ भने तपाईं प्रहरीको फन्दामा पर्न सक्नुहुनेछ । अत्यावश्यक कामबाहेक त्यत्तिकै हिँड्नेलाई प्रहरीले समातेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने भएको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले आज लकडाउनको चौथो दिन अन्य दिनको भन्दा हिँडडुलमा कडाइ गरेको बताउनुभयो । “लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्न थालेपछि आजदेखि हामीले थप कडाइ गरेका हौँ” उहाँले भन्नुभयो, “बिना काम बाहिर निस्कनेलाई नियन्त्रणमा लिइनेछ ।”उहाँका अनुसार यसरी मानिस अनावश्यक रुपमा बाहिर निस्केकालाई नियन्त्रण गर्नका लागि परिसरले दुईवटा गाडीमा प्रहरीको विशेष टोली परिचालन गरेको छ । टोलीमा रहेका प्रहरीले आफूसँग भएको उपकरणमार्फत २–३ फिट टाढैबाट बाहिर हिँडिरहेका मानिसलाई नियन्त्रणमा लिनेछ ।
“ती दुई गाडीमा रहेका प्रहरीको गस्ती सानासाना गल्लीमा पनि जान्छन् । अनावश्यक रुपमा हिँडिरहेकालाई हामीसँग भएको उपकरणले नियन्त्रणमा लिन्छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “यसरी नियन्त्रणमा लिएकालाई प्रहरीको क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ ।”उहाँका अनुसार अहिलेसम्म १७ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । उहाँले कुनै धर्ना, जुलुस नभई महामारी रोक्नका लागि सरकारले चालेको कदमलाई सबैले सहयोग गरेर बाहिर ननिस्कनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
यसैगरी अन्य दिनको तुलनामा आज कम सवारी साधन चलेका छन् । महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले सरकारले गरेको लकडाउन उल्घङ्घन गर्ने १५८ सवारी साधानलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी गराउनुभयो । विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भइरसको महामारी बढ्दै गएपछि सरकारले यही चैत ११ गतेबाट लागू हुने गरी लकडाउनको घोषणा हो ।सरकारले अत्याश्यक खाद्यपदार्थबाहेक अन्य सवारी साधन चल्न दिएको छैन भने मानिसलाई पनि बाहिर निस्कन भनेको छैन । अहिलेसम्म नेपालमा विदेशबाट आएका तीनजनामा कोभिड–१९ सङ्क्रमण देखिएको छ । लकडाउनमा अत्यावश्यकीय पसलबाहेक अरू सबै बन्द छन् । सरकारले दूध, पानी, खाद्यान्न, तरकारीलगायतका पसल खुल्ला राख्न आग्रह गरे पनि त्यस्ता अधिकांश पसल बन्द छन् ।